Dhageyso:-Khaatumo oo War aan la fileyn ka sheegtay wadahalkii S.land |
Dhageyso:-Khaatumo oo War aan la fileyn ka sheegtay wadahalkii S.land
Maamulka Khaatumo sida la sheegay waxa la doonayaa in la bur buriyo oo meesha gebi ahaanba laga saaro kuna biiro Maamulka Soomaaliland oo awoodooda iyo dhulka ay ka arimiyaan loo ballaariyo.
Ififaalo lagu rumeysan karo warkaasi ayaa jiray Labadii todobaad ee lasoo dhaafay markii mas’uuliyiin kasocotay Khaatumo ay Magaalada Caynaba kulan kula qaateen Xubno iyagana ka socday Maamulka Soomaaliland.
Maamulka Somaliland iyo dhigooda Khaatumo oo mas’uuliyiin uhadashay waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin kulankii Caynaba hase ahaatee Afhayeenka Khaatumo ooSaacado ka hor hadlay waxa uu meesha ka saaray in wax wada hadal ah oo furmay aysan jirin oo dib loo ballamay kulan Dalka Dibadiisa ku dhexmara labada maamul.
Maxamud Sheekh Cumar Afhayeenka Khaatumo ayaa beeniyey in Maamulkooda uu ku biirayo Soomaaliland isagoo sidoo kale dhaliilay Shirkii Xamar lagu soo gaba gabeeyey ee madasha Wadatashiga Qaran ay War murtiyeedka kasoo saareen.
HALKAAN RIIX SI AAD UDHAGEYSATO CODKA